IStumbleUpon iyaqhubeka nokuphakela Ibhulogi Yami | Martech Zone
NgoLwesibili, Novemba 18, 2008 NgoLwesibili, Okthoba 4, 2011 Douglas Karr
Namuhla kusihlwa bengihlaziya amanye amasayithi abhekisele kubhulogi lami futhi angikwazanga ukuzibamba kodwa ngibona isibalo esivelele ukwedlula noma iyiphi enye - StumbleUpon kushayela ithrafikhi eningi esizeni sami! Kunezindawo eziningi zokubekisa amabhubhu kuwebhu, kepha iStumbleUpon inayo leyo ndlela eyodwa yokuhleleka okungekho abanye abanayo - banikeza izixhumanisi ngenzalo ethile.
Lapho ulayisha ifayela le- Ibha yamathuluzi eStumbleUpon (lapho wena ngokuphelele kufanele), wena khubeka kumasayithi bese ubanika izithupha phezulu noma izithupha phansi. Njengoba ukhiqiza umlando, amasayithi iStumbleUpon ikuthumela kuwo ngokulandelayo afaniswe ngokuya ngamathuba akho wokuwanika isithupha. Inqubo ephawulekayo ehlakaniphile kakhulu.
Mhlawumbe okubaluleke kakhulu kunenani lezivakashi uStumbleUpon angithumela lona iqiniso lokuthi yisayithi elibhekisayo elinezinga eliphansi kakhulu! Cishe isigamu sabantu abathunyelwe kusayithi lami chofoza kokunye okuthunyelwe noma ikhasi kuwebhusayithi. Leso isilinganiso esiphansi kakhulu, esiphansi kunanoma iyiphi enye indawo ebhekiswayo.
Ngokungafani Slashdot, Digg, nezinye izinjini zokubekisa ezinkulu, iStumbleUpon ine "Midas touch", enikela ngebhulogi yakho noma iwebhusayithi ngethrafikhi ezothola okuqukethwe kwakho efanele ngokususelwa kuphrofayli abakwenzile ngokuthandwa noma ukungathandwa yisivakashi sakho.
Sibonga kakhulu komunye wababhekisi abahola phambili kuwebhusayithi yami, IBittbox. Bathumele ithrafikhi eningi ngokungangeza ku-blogroll yabo kunalokho engingakufanelekela ukubasiza. Uma ungumculi we-newbie noma onamava wezithombe, qiniseka ukuthi ubheka isiza seBittbox bese ubhalisela okuphakelayo kwabo. Kuyisayithi elimangalisayo elinokufundisa okuningiliziwe kanye namathani wokulandwayo.
Qaphela futhi lokho Twitter kukhasa ukudluliselwa! Uma ungasethanga i-Twitterfeed noma ungeze indlela yokuzivumela ukuthi ibhulogi yakho ithunyelwe ku-Twitter, kufanele ukwenze namuhla!
Nov 19, 2008 ngo-9: 45 AM
Ngaphezu kokuthumela amakhasi akho kule mithombo Thatha isikhathi sokukhubazeka noma i-Twitter ngomngani. Ngaphandle kokucela, bavame ukubuyisela umusa, futhi kunokuthembeka okuningi lapho omunye umuntu ekhuluma ngawe, ama-Retweets, ama-Stumbles noma ama-Diggs.
Nov 1, 2010 ngo-9: 26 AM
Ngihlale ngibuza ngenhloso nokubaluleka kokubhukimakhi kwezenhlalo. Yize ngibonile ukwanda kwethrafikhi kubhulogi yethu kusuka eStumbleUpon, kuyangimangaza ukuthi abantu bayayisebenzisa insiza.
Nov 1, 2010 ngo-9: 31 AM
Angiphikisi @chuckgose. Ngicabanga ukuthi abanye abantu bavele badonsekele kumathuluzi ahlukile. Kukhona isixuku esilambile ngakolunye uhlangothi lwalezo zingosi, noma kunjalo. Uma ukuthumela ibhukumaka lapha nalaphaya kungashayela ithrafikhi efanele, kungani kungenjalo?
Nov 1, 2010 ngo-10: 58 AM
Enye yezinkinga zokusebenzisa ukukhubeka yize uncike kuma-hits ukuthi mangaki awo axhumana ngempela nesayithi lakho? Ngiqaphele ukuthi amasayithi ami ambalwa aqhamuka nezinombolo ezithile eziphakeme kakhulu ukusuka ekukhubekeni, kathathu ngokunye okuqondisa ithrafikhi, kepha inani lamazwana lihlala linjalo. Isikhathi esimaphakathi kusayithi asikashintshi nhlobo. Ngiyazi ukuthi ithrafikhi, kodwa ngasikhathi sinye, kuzuzisa kanjani uma abantu beshaya isiza bese beshiya ngesikhathi esifushane futhi bangayi kwamanye amakhasi ...
Imicabango nje engemuva kwengqondo yami, ngingaba nentshisekelo yokuzwa ukuthi imicabango yakho ikuphi 🙂